Kitra – «Poule des As»: handray ny lalao voalohany ny Elgeco sy ny Cnaps Sport | NewsMada
Kitra – «Poule des As»: handray ny lalao voalohany ny Elgeco sy ny Cnaps Sport
Par Taratra sur 27/07/2018
Hanomboka, ny 5 aogositra ho avy izao, ny “Poule des As”, dingana farany hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Hiady izay ho lohany, ny FC Vakinankaratra, ny Elgeco Plus Analamanga, ny Cnaps Sport Itasy ary ny Fosa Jr Boeny.
Nasiam-panovana ny fiatrehana ny “poule des as”, tamin’ity. Samy handray lalao ao amin’ny kianjany avy ny ekipa tsirairay ary samy hivoaka ihany koa. Hisesy ny fihaonana, ataon’ny ekipa amin’izany satria isan-kerinandro ny lalao.
Hampiantrano ny lalao voalohany ny Cnaps Sport sy ny Elgeco Plus, ny alahady 5 aogositra. Handray ny FC vakinankaratra, ny ekipan’Itasy ary ny Elgeco kosa hiaona amin’ny Fosa Jr. Hilana lazonady ny fiatrehana ny lalao satria samy handray lalao telo sy hanao fivoahana telo avy ireo klioba hifaninana, amin’ity. Haharitra hatramin’ny 23 septambra, ny fifanintsanana.
Ny 12 aogositra ny andro faharoa, raha 19 aogositra ny andro fahatelo. Hitohy indray izany ny 2 septambra ary hiato kely aorian’io satria hanomana ny fiatehana an’i Senegal, eo amin’ny fifanintsanana hiadiana ny “Can 2019”, ny Barea de Madagascar. Lalao mandroso, hatao etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny 9 septambra, ho avy izao. Tsy hiverina hifaninana indray ny ekipa efatra raha tsy any amin’ny 16 septambra. Ny andro farany kosa dia ny alahady 23 septambra. Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara, ny ekipa be isa indrindra.